Khibrad Soo Saaraha | Xiamen Yasin Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd.
SOO SAARAHA KHIBRAD
Factory Warshaddeenu ma laha kaliya xoog farsamo oo adag, qalab aad u fiican iyo qalab tijaabo oo sax ah oo heer sare ah laakiin sidoo kale maareynta heerka koowaad.
● Maaddaama hal-ku-dhiggeennu yahay in la qaato tiknoolajiyad cusub oo lagu hagaajinayo tayada wax soo saarka, si aan ugu ballaarinno suuqyadeena tayada ugu sarreysa iyo in aan ku dhisno deynteenna adeeg wanaagsan, waxaan ku dhiiran nahay sameynta hal-abuurnimo, waxaa naga go'an inaan kor u qaadno tayada oo aan u hamuun qabno soo saarista noocyada kala duwan ee gelatin.
Maalmahan in kabadan 8000 tan oo ah gelatin iyo kolajiin sanadle ah ayaa caan ka ah gudaha gudaha waxayna galaan suuqyada caalamiga ah. Dhammaan alaabooyinka waxay la kulmaan heerka qaranka iyo heerka warshadaha.
Warshaddu waxay ubaahantahay khibrad, si loo hubiyo tayada ugu fiican oo had iyo jeer loo cusbooneysiiyo khadka wax soo saarka. Taasi waxay ka dhigi kartaa alaab-qeybiyaha gelatin wax soo saar aad u wanaagsan isla markaana kaydiya kharashka. Injineerkeena khibrada leh ayaa halkaa u jooga inuu kuugu adeego gelatin ugu fiican dalabkaaga.
Si aan u nidhaahno alaabtayada tayada leh, waa inaan sidoo kale hubinnaa nadaafadda, xakamaynta bakteeriyada, dib-u-warshadaynta si adag ayaa loo xakameeyay. Alaabteenu waxay leeyihiin adeegsiga warshadaha cuntada, aagga dawooyinka, warshadaha dheeriga ah iyo qurxinta iwm kuwaas oo u baahan daryeel heer sare ah si loo hubiyo in wax dhibaato ah aysan uga sii gudbi doonin tayada alaabteenna.
"Doorashadaada ugufiican, Alaab-qeybiyahaaga lagu kalsoonaan karo!" waxaan marwalba siineynaa alaabadayada tayada wanaagsan ee xasiloon oo leh qiimo tartan, gaarsiin deg deg ah, adeeg aad ufiican oo aan ugu riyaaqay macaamiisha dhexdooda